Mariela Carril | | မက္ကစီကို, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
မက္ကစီကို နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ သမိုင်းနှင့်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသောခရီးသွား wonderful ည့်သည်အလွန်သည်။ ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်ကိုမမေ့နိုင်သောသဘာဝနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဘဏ္treာများပါ ၀ င်သည့်အံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခု။
ဤကျွန်းဆွယ်အားယူကက်တန်ကိုယ်တိုင်၊ မင်စီကိုစခန်းအတွင်းရှိကင်တားနားနှင့်ပြည်နယ်သုံးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကြောင်းမှာဘီလီဇ်နှင့်ဂွာတီမာလာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ယူကတန်ပြည်နယ်၏မြို့တော်မှာမီရီဒါဖြစ်သည်။
ဒီဒေသကိုစပိန်တွေမရောက်ခင်မှာနာမည်ကိုသိခဲ့ရတယ် မရမ်းကုန်း (သိပ်မများဘူး၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို) နှင့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည် မာယာယဉ်ကျေးမှု။ ထို့ကြောင့်ကျွန်းဆွယ်သည်အရေးကြီးသော Izmaal မြို့များ၊ Chichen Itzáသို့မဟုတ်ယခင်Ichcaanzihóoဟုခေါ်သောMéridaမြို့များဖြစ်သည်။
ဒီယဉ်ကျေးမှုပြိုလဲပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမြို့ကြီးများနဲ့အခြားမြို့များစွာဟာ ၁၆ ရာစုအစမှာစပိန်မရောက်ခင်အထိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ထို့ကြောင့်ဒေသသည်အရေးကြီးသောနေရာဖြစ်သည် ရှေးဟောင်းသုတေသနက်ဘ်ဆိုက်များ မာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဒီမှာပါ နွေရာသီမှာအရမ်းပူကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်ဆာအပူပိုင်းဒေသတွင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပျမ်းမျှအပူချိန် ၂၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသော်လည်းမြောက်ပိုင်းခြမ်းရှိနွေရာသီလများ၌ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကန်များ၊ ဂွမြစ်များသို့မဟုတ်မြစ်များ၏နယ်မြေမဟုတ်သော်လည်းဟုတ်ကဲ့ ကြွယ်ဝသောမြေအောက်ရေကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ် အဲဒီမှာဒါကြောင့်ပဲ ဂူများနှင့် cenotesထောင်နှင့်ချီသော
ပြည်နယ်၏အရေးအပါဆုံးမြို့ကြီးများမှာ၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်သည် Mérida, Valladolid နှင့် Ticul။ မြို့တော်ကို White City ဟုလူသိများပြီး၎င်းသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သောနေရာဖြစ်သည်။ စပိန်လူမျိုးကို၎င်းကို ၁၅၄၂ ခုနှစ်တွင် Maya Toh တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Plaza Grande နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မြင်နိုင်သည်။
တစ်လမ်းလျှောက် Merida သင်သည်သင်၏ထည့်သွင်းရန်ရှိသည် ဟောငျးမြို့ ဒီမှာက၎င်း၏အကောင်းဆုံးအဆောက်အ ဦး များအချို့: အစိုးရနန်းတော်, အ Montejo အိမ်, Las အမွှာအိမ်များ သို့မဟုတ် San Idelfonso ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ မွန်တီယိုသည်မြေယာများကိုဖြန့်ဝေပေးရန်တာဝန်ရှိသည့်အဒယ်လန်တိုဒိုးဖြစ်ပြီး ၁၅၄၉ ခုနှစ်တွင်သူသေဆုံးပြီးနောက်မိသားစုအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို Calle 1549၊ ၆၀ နှင့် ၆၂ တွင်ရှာနိုင်သည်။
San Ildefonso ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်လက်တင်အမေရိက၌တည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည် နှင့်မက္ကဆီကိုတွင်အသက်အကြီးဆုံး။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ၁၅၉၈ ခုနှစ်တွင်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တန်းသုံးခုနှင့်ချာ့ချ်သုံးခု၊ Moorish ပုံစံမျှော်စင်နှစ်ခုနှင့်တိုင်များနှင့်မုတ်များပါရှိသည်။ အဆိုပါမျက်နှာစာ Renaissance သည်နှင့်သင်က Main Square ၏ရှေ့မှောက်၌တွေ့ socket မြို့။
၎င်း၏မြို့အဘို့ Valladolid ၎င်းကိုလူသိများသည် အရှေ့၏ Sultana။ ဒါဟာအစကတည်းကအလွန်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ် 1543 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် Zací၏မာယာမြို့အကြောင်း။ ဤနေရာတွင်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းပါဝင်သည် ယခင် Berndino ၏ခရစ်ယာန်သီလရှင် Calzada de los Frailes၊ ရောင်စုံ၊ San Servacio ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Agave Distillery၊ မြူနီစီပယ်နန်းတော်သို့မဟုတ် Artisan စင်တာ.
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗိသုကာဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုများအပြင်မြို့တော်အတွင်းထောင်နှင့်ချီသောအချို့လက်တစ်ဆုပ်စာရှိသည် cenotes သို့မဟုတ်ယူကတန်၌မြေအောက်ရေတွင်း။ သူတို့က Zací cenote, el X'kekénအဆိုပါ Samula နှင့် Suytún။ နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အခြားသူများရှိပါတယ် Cenote Xcanchéနှင့် Hubik ။ အရေးကြီးသောရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများလည်းရှိသည် Cobá၏ရှေးဟောင်းသုတေသနဇုန်နှင့် Ek Balam ၏။
ထိုအသိသာလည်းနီးကပ်သည် Chichen Itza ။ အပျက်အယွင်းများသည် Cancun သို့သွားသောလမ်းဖြစ်သည်။ Méridaကနေ 120 ကီလိုမီတာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြို့တော်သည် ၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီး၊ ထင်ရှားသောဘာသာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအထက်တန်းလွှာများကတောက်ပသောနန်းတော်များ၌နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းဝန်းကျင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀ မှ ၆၀,၀၀၀ ကြားရှိသူများသည်ခေတ်သစ်မြို့တစ်မြို့ကဲ့သို့နေထိုင်ကြသည်။
အပျက်အယွင်းအတွက်ထွက်ရပ် Kukulcánရဲတိုက် မီတာ ၃၀ မြင့်တယ်။ နေဝင်ချိန်ရောက်ရင်ဒီနှစ်ရဲ့ဘယ်ညမှာမဆိုပျော်မွေ့နိုင်တယ် အလင်းနှင့်အသံပြပွဲ။ အခြားအရေးကြီးသောအဆောက်အအုံများမှာ Steam Bath၊ Market၊ Warriors ၏ဘုရားကျောင်း၊ Venus ၏ Platform, Sacred Cenote, Jaguars နှင့် Eagles ၏ Platform, ဦး ခေါင်းခွံ၏ Platform, Ball Court၊ , အ Cenote Xtoloc ...
Chichen Itza ကျော်လေယာဉ်ဖြင့်ပျံသန်းမှုရှိပါတယ်ငါ Kukulkan ညတွေအကြောင်းငါမပြောခင်၊ Balamkanché Grottoes, ဥပမာ။ Chichen Itzáသည် Pueblo Mágicoဟုအမည်တွင်သောယူကာတန်ပြည်နယ်၊ Izamal ရှိအခြားမြို့နှင့်လည်းမဝေးပါ။
Izamal သူသည်ဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီ၊ ကိုလိုနီခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုသုံးခုကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Isaအဝါရောင်မြို့, ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း၏အိမ်များအားလုံးသည်ဤအရောင်ဖြင့်ပန်းချီကားမထားပါကဂျွန်ပေါလ် (၂) သည်ထိုနေရာသို့လည်ပတ်ခဲ့သည် (ဗာတီကန်၏အဝါရောင်သည်အဝါရောင်ဖြစ်သည်) ။ Izamal တွင်သင်သွားရောက်နိုင်သည် San Antonio de Padua၊ Plazuela de la Cruz၊ Plaza de la Constitución၏ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်း, စျေးဝယ်များအတွက် Artisan ယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှင့် Izamal ၏ပိရမစ်ဒါပေါ့။
Izamal တွင်ကောင်းသောလမ်းလျှောက်မှုသည်လှုံဆော်နေသောတောင်သို့တက်။ သင့်ကိုကိုလိုနီလမ်းများပေါ်သို့ပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမြို့ကြီးတွေအပြင်ယူကာတန်မှာဘာရှိလဲ။ ကောင်းပြီ, ကမ်းခြေ, ခြံ, ကွန်ဗင်းရှင်း, ဂူနှင့်ဂူ! ကမ်းခြေနဲ့စကြရအောင် - ပြည်နယ်၏ကမ်းရိုးတန်းသည် ၃၇၈ ကီလိုမီတာရှည်သောစိမ်းရေများရှိသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည် Progreso သဲသောင်ပြင်, ပြည်နယ်၏ entry ကိုဆိပ်ကမ်း။ ၎င်းတွင်လှပသော boardwalk ရှိပြီးသင်္ဘောသားများရောက်ရှိလာသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည် plaza၊ စျေး၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များရှိသည်။ Merida မှ ၃၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ဒေသခံများနှင့်လူကြိုက်များသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 36 ကီလိုမီတာကွာအခြားရှိပါတယ် ကမ်းခြေ, Celestún။
Celestúnသည် ပန်းရောင် flamingos ၏ပြည်နေ့စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာ လှေတစ်စီးငှားပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ် ဒီရေတောများ နှင့်ဝင်ပါ အုန်းလက်ဝါးနှင့်ကမ်းခြေ။ Flamingos နှင့်ကြည်လင်သောကြည်လင်သောရေကိုတွေ့ရန်နောက်ထပ် ဦး တည်သည် Telchac, Méridaကနေ 65 ကီလိုမီတာ။ Santa Clara, Dzilam de Bravo (သို့) Crisanto စသည့်သဲသောင်ပြင်များကိုသိရှိနိုင်ရန်သင်ဤအရပ်မှသွားနိုင်သည်။ Telchac က ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်း အဖြူကမ်းခြေနှင့်အတူအလွန်ပါ။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ site တစ်ခုကတော့ Las Coloradas သဲသောင်ပြင်, ပင်လယ်လိပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇုန် 80 ကတည်းက။ ခုနစျပါးမှလိပ်မျိုးစိတ်သုံးမျိုးရှိသည် ပင်လယ်လိပ် ကမ္ဘာမှာဘာတွေလဲ ဒါကြောင့်စျေးဆိုင်လည်းမရှိ၊ စျေးလည်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်နေ့တွေကိုကုန်လွန်စေနိုင်မယ့်ဆိုင်တွေရှိတယ်။
တစ် ဦး ကြည့် Mundo မာယာ Chichen Itza အပြင်, ပါဝင်သည် Uxmal, Ek Balam, Mayapán, Chacmultún, Dzibilchaltún, Xcambóသို့မဟုတ် Puuc လမ်းကြောင်း။ သင်ကြိုက်လျှင် cenotes ယူကာတန်ရှိ၎င်း၏ရေနေဆွဲဆောင်မှုများမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။ Cuzamá, Lol Ha, Sambula, Ik kil, Sacred open-air cenote, cavern style sh'keken, Samula, Zcí, Yodzonot, Uinic, Santa Rosa, Balmi, Canunché , San Ignacio, Xcanchéသို့မဟုတ် Chiquila, အခြားသူများအကြား, အချို့သောလိုဏ်ဂူအမျိုးအစား, အခြားသူများကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် Semi- ဖွင့်လှစ်။
ကိုလိုနီခေတ်မှ စ၍ အမွေအနှစ်ဖြစ်သည် heneque ခြံပြီးသားဒြပ်အားဖြင့်အစားထိုး Henequen ဖိုင်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းထံအပ်နှံ။ ယနေ့လူများစွာကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်း သူတို့ကအကြားတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ၁၇ နှင့် ၁၉ ရာစုနှစ်များ, အစိမ်းရောင်ရွှေခေတ်၌။ လူကြိုက်အများဆုံး haciendas ဖြစ်ကြသည် Hacienda Xcanatún၁၈ ရာစုမှယနေ့ဟိုတယ်၊ Temozón Sur လုပ်ခြင်းမီရီဒါ, 45 ကီလိုမီတာကနေ Hacienda Santa Rosa က de Lima ဆယ်ရှစ်နှစ်ရာစု၏လည်းရှားစောင်းလက်ပတ်၏စိုက်ပျိုးခြင်းမှဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည် Hacienda Yaxcopoil၎င်း၏ပေါ့ပလာနှင့်အတူ။
ဟိုတယ်များသို့မဟုတ်တစ်နေ့တာခရီးစဉ်များအဖြစ်တံခါးများကိုဖွင့်ပေးသည့်အရာများစွာရှိသည်။ ဤရွေ့ကား haciendas လည်းအကောင်းဆုံးအချို့ကိုကြိုးစားရန်ကောင်းသောနေရာများဖြစ်ကြသည် ယူကာတန်အစာအိမ်, ကြက်ဆင်အသား, ပြောင်းဖူး, tortilla, ငရုတ်သီး, ပဲ, ထောပတ်သီး, Tamales, tacos နှင့်မုန်အပေါ်အခြေခံပြီး။
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းခရီးသွား delight ည့်သည်အားနှစ်သက်ရာယူကတန်ပြည်နယ်သည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သဘာဝတရား၊ ကိုလိုနီမြို့များ၊ ဖလင်မင်နှင့်လိပ်များ၊ မာယာအပျက်အယွင်းများ၊ ဥမင်များ၊ အများအားဖြင့်Méridaသည်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုကိုနှစ်သက်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » ယူကတန်မှာဘာကြည့်ရမလည်း